shwezinu: ဘလော့ဂ်ဒေး အမှတ်တရ မှောက်ပြတဲ့ စာလေး
Posted by SHWE ZIN U at 3:32 AM
ကနေ့အားလို့ အွန်လိုင်းတက်တား)
(တပည့်တော် တို့ ပြည်သူများ နောက်တကြိမ် အကယ် မခံနိုင်တော့ ပါဘူး ... )
ဒီတစ်ပို့စ်ထဲနဲ့တင် အမှတ်ပြည့်ပေးလိုက်ပြီ...ဘယ်သူဆဲဆဲ ကျွန်တော်လည်း ခံလိုက်မယ်ဗျာ...မရွှေစင်အမြင်နဲ့ ကျွန်တော့်အမြင် တစ်ထပ်တည်းပဲ...
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးက လူမျိုးကြီးကိုးဗျ...ငါလူမျိုးကို ငါ့ဘာသာကို ငါတို့ချင်းပဲ အနိုင်ကျင့်မယ် သူများအနိုင်ကျင့်တာတော့ လုံးဝလက်သင့်မခံဘူးဆိုတာပဲ ထင်ပါရဲ့...ဒါမို့ ကြွေးကြော်သံတောင် ပြောင်းပေးလိုက်ချင်တယ်...
တံဇဉ်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ...( အတွင်းဘက်ပဲ လှည့်ပြီးရှနေတော့တာကိုး...)
ဦးဟန်ကြည်ကတော့လူကို လူလို့ပဲမြင်ပါတယ်...ကိုယ်တိုင်က ဗုဒ္ဓဘာသာကို နှစ်တန်းနှစ်ကစပြီး ရှစ်တန်းကျောင်းပိတ်တဲ့အထိ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နွေသုံးလတိုင်း သင်ယူခဲ့တာမို့ မိရိုးဖလာအဆင့်ထက်ပိုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာလို့လည်း ခံယူပါသဗျား...
စာဖတ်ရင်းနဲ့ အောင်ပင်လယ်ကန်မှာ အိမ်ရှေ့ကိုယ်တော်ကြီး ရေမြှုပ်မိုင်းခွဲတော့ ငါးသတ္တ၀ါတွေသေလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ဆွမ်းဘုဉ်းမပေတဲ့ မင်းဆရာတော်ကို သတိရတယ်...အင်း သူ့အကြိုက်လိုက်ပြီး မိုင်းမခွဲရတော့ တိုင်းပြည်ကျွန်ဖြစ်ပါလေရော...ခက်ပါ့
အမြင်ကို ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်...ဘာသာတိုင်းရဲ့ ဘာသာဝင် အတုတွေ ဂယောင်ထတာကြောင့် တိုင်းပြည်ကြီး ကမောက်မကဖြစ်တာလို့ပဲ ပြောပါရစေ...စစ်မှန်သော ဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပါစေဗျာ...
Sometime injustice itself injustice
ညီမနဲ့ ခင်တဲ့ ဦးဇင်းကလည်း အဲလိုပြောသေးတယ်။ ညီမတော့ ရယ်ပြီး ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တယ်..။ " ဦးဇင်း တပည့်တော် ဗုဒဘာသာဝင်ပီပီ သာသနာကို ကြည်ညိုပါတယ်။ မျိုးစောင့်ဥပဒေကြီးတော့ မကြိုက်လို့ စီဒီချပ် မကြည့်တော့ပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့် ရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်မို့ ဦးဇင်းလည်း သဘောထားတူမယ့် တခြားသူတွေကို ပေးဝေလိုက်ပါဘုရား"လို့ :D
သူလည်း ဇွတ်မပေးပါဘူး။ ပြုံးပြီး ပြန်ကြွသွားတယ်။ နောက်တော့ အိမ်နားက သုံးလေးအိမ်ကို ဝေခဲ့တယ်လို့ ကြားတာပဲ.
ဘလော့ဒေး အမှတ်တရလေး ရေးပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မမ စာ တွေ မဖတ်ရတာကြာပြီ။
ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင် ရောက်ပြီလား လူတိုင်း တန်းကူ အခွင့်အရေး ရကြပြီလား.....ဒီ post ကို အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ် ....
တို့အမလေး မှောက်စရာအိတ်မရှိလို့သနားပြီးနေတာ...အင်း တို့အမတော့ အိတ်လေးတလုံးလောက်ဝယ်ပေးအုံးမှလောက်လို့တွေးမိတယ်....(ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ပဲဝယ်ပေးမှာပါဗျာ.... လက်ထဲကိုင်သမျှ တွေ့တဲ့နေရာချပစ်ခဲ့လွန်းလို့ပါ)..သူ့ခမျာ မှောက်စရာမရှိရှာကြံမှောက်တော့တာပဲ....ဘယ်လိုမှောက်မှောက်ပါလေ......တန်းစီတိုးစောင့်မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ ၀ယ်ယူရတဲ့ဘ၀မျိုး ဘယ်တော့မှ မရောက်ပါရစေနဲ့ဗျာ...
အာဏာရှင်တွေရဲ့ နောက်ဆုံးနဲ့ အပြင်းထန်ဆုံး တိုက်ကွက်ပါပဲဗျာ...။ မြန်မာပြည်ကြီး ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ...။
တကမ္ဘာလုံးပဲ ဆွေမျိုးတော်ကြပါသတဲ့.. မရွှေစင်ဦး..မစည်းစိမ်ရှင် တို့ရေ။ ဘလော့မှာ အဲ့ဒီလို နှုတ်မဆက်ရတာ ကြာပါပေါ့..
ဘလော့ဒေးနဲ့ အိတ်မှောက် တက်ဂ်ပို့နှစ်ခု ရောပြီး ရေးလိုက်တာ စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာ... :)
ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည် ကိုးကွယ်နေပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်မှုတွေကို အခုလို ဥပဒေတွေနဲ့ အနားသတ်တာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဖူး အစ်မရယ်..။
မျိုးမစစ်ရေးတဲ့ ခွေးစာကို မျိုးမစစ်တဲ့ ခွေးမျိုးတွေက comment ပေးကျတယ်
ဘာသာရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲ ၊ အရေးအခင်း ဆိုတာ ကမ္ဘာမှာ နှစ်အရှည်ကြာဆုံးတွေပါပဲ ... ။ ဘယ်သူမဆို ... ကိုယ် ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ ကို အထွဋ်အမြတ် ထားတတ်စမြဲပါပဲ ... ။ ဒါပေမယ့် ... အခု မြန်မာနိူင်ငံမှာ ဖြစ်နေတာတွေက ဘာသာရေး စစ်ပွဲ ၊ လူမျိုးရေး စစ်ပွဲ တွေ လို့ မမြင်မိပါဘူး ။ အာဏာရူး ၊ စစ်ခွေးလက်ကျန် ၊ နိူင်ငံရေးသမားတွေ ရဲ့ တိုင်းပြည်လူထု အပေါ် ပါးလှည့်နားကိုက်ချင်တဲ့ နိူင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေလို့ ပဲ ယူဆချင်ပါတယ် ။
ဆီမှာ အစ်မလင့်က သေသွားပြီရယ်...။ခုလိုဖတ်လိုက်
ငါလိုးမတွေ ဆဲတယ်ကွာ ပြောချင်ပြော စောက်အရေးအသားကိုက စောက်ခွေးမျိုးမှန်းသိသာလိုက်တာ မင်းရေးတာ စာမဖြစ်သေးပါဘူးကွာ မြန်မာစာကို သေချာသင်လိုက်အုံး မင်းနှမကို အရင်ပေးစားကြည့်လိုက် မင်းအမေရော
အေး ငါ့ဆီမှာ မင်းတို့ရဲ့ သောက်ခွေးမတွေ ရှိထားတယ်
ကျွတ်ကျွတ် ပယ်ပယ်နယ်နယ် အားရစရာကြီးကွ မင်းတို့ကြည့်ချင်ရင် videoတင်ပေးမယ်
သိပ်အထင်တွေကြီးမနေနဲ့ မင်းတို့ခြံလောက်တော့ ထပ်ကာလိုက်အုံး
အရမ်းကို အနှစ်သာရ ရှိတဲ့ စာလေးပါ မမ ။ လေးစားမိပါတယ် ။ ဖတ်ရတာ အကျိုးရှိစေပါတယ် ။
မမရေ မမရေးသားတာကို အပြည့်ဝ ထောက်ခံပါတယ် ။
ကိုယ်တိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည် ကိုးကွယ်နေပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်၊ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်၊ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်မှုတွေကို အခုလို ဥပဒေတွေနဲ့ အနားသတ်တာကိုတော့ ဘယ်လိုမှ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဖူး အစ်မရယ်..။ဆိုတဲ့
မမမြသွေးနီ ခံယူချက်လေးကိုလည်း နှစ်သက်မိပါတယ် ။